घूस खानुअघि हरेक सरकारी कर्मचारीको दिमागमा रविको चित्र आउँथ्यो… - Damak No.1 Online Patrika
भीड़बाट कानुन निर्देशित हुनुहुँदैन । तर कानुन पहुँचमा हुनेहरूको स्वार्थले पनि प्रेरित हुनुहुँदैन । कानुन व्यक्तिपिच्छे फ़रक हुनुहुँदैन ।
अनुसन्धानपछि अस्मिता कार्की निर्दोष देखिइन् भने के होला ? अनुसन्धानले अझ उनलाई नै ‘पीड़ित’ देखायो भने के होला ? ‘निर्दोष देखिए छुटिहाल्छिन् नि’ भन्ने तपाईंको वाक्य कति हचुवा र असंवेदनशील छ भन्ने शायद तपाईं आफैलाई थाहा नहुनुपर्छ ।
५ बर्ष साकेला नाच क्षेत्री बाहुनले सोइ ढोले सोइ भन्दै नाच्नु भने यो पनि बाहुन क्षेत्रीको चाड भन्छन
सावित्राले ‘बलात्कार गर्दै हिड्ने पिपासु भन्दा, बाथरूममा हस्तमैथुन गर्ने पुरुष महान’ फेसबुकमा लेखेपछि…
दमक महोत्सवमा ‘भविस्य हेर्ने गधा’ सामाजिक संजालमा ब्यापक बिरोध, भिडियो र फोटो सहित
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको यो फोटोको वास्तविकता यस्तो हो, भिडियो सहित